[Hevitra] Serivisy momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana - SME Networks | Avy amin'ny Linux
phico | | Avy amin'ny Linux, GNU / Linux, soso-kevitra, Tambajotra / seriver
Ny ankamaroan'ny lahatsoratra hafahafa izay navoaka hatreto tao anatin'ity andiany ity Tambajotra SME, dia noforonina tamin'ny fomba iray hahatratrarana an'io teboka io tamin'ny fahatakarana mazava ny maha-zava-dehibe ny serivisy DNS sy DHCP - nefa tsy adino ny NTP - ho an'ny Network Business.
Araka ny nohazavainay tamin'ny lahatsoratra teo aloha, serivisy tena ilaina ireo - indrindra ny DNS - ho an'ny tambajotra rehetra. Marina fa tsy mikasika programa toa ny NSD na mpizara anarana manampahefana be mpampiasa ao amin'ny mpizara Root DNS izahay ary afaka miasa amin'ny raharaha Delegated Zones amin'ny andraikitray.
Raha tsy nanokana ezaka sy fotoana lehibe ho an'ireo lohahevitra teo aloha isika, dia tokony hanazava amin'ny fomba mandatory azy tsirairay avy isika izao. Izany no antony manan-danja Ho an'ireo vao tonga ao amin'ny SME Networks, vakio sy diniho ny lahatsoratra ambadika. Raha tsy mamaky azy ireo ianao dia hanana banga sy fanontaniana maro izay tsy hovalianay amin'ny ho avy. 😉
Any amin'ny fireneko -Cuba- dia tena ara-dalàna tokoa raha, rehefa Administratera Network na Scientiste informatika izay nomena andraikitra hametraka tambajotra vaovao ho an'ny SME rehetra, nefa tsy mieritreritra indroa mametraka ny serivisy momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana miorina amin'ny ny Microsoft® Active Directory®. Tsy misy ifandraisany fa manana ekipa 15 na 1500 ny SME. Mametraka ny Microsoft Active Directory 2008, 2012, na "ny kinova farany" izy ireo nefa tsy mieritreritra izany akory.
Tsy manana ny fahaiza-misaina ianao - ny kely fahita indrindra amin'ny fahatsapana - hijerena na hahafantarana fomba hafa.
Tsy mihoa-pefy aho rehefa manamafy ny voalaza etsy ambony, na dia tato ho ato sy eo ambany faneren'ny fitantanan-draharaha aza, takian'izy ireo ny fametrahana Zentyal®, izay rindrambaiko tsy miankina izay manolotra kinova fiarahamonina izay mamela zavatra be loatra indraindray. Azoko antoka fa avo kokoa ny kinova karama, ary amin'ity bilaogy natokana ho an'ny Free Software ity dia tsy maintsy mangarahara araka izay azo atao isika ary maneho ny fomba fijerintsika miorina amin'ny fomba fanao izay heverinay ho crititeran'ny fahamarinana tsara indrindra.
Fantatro ny tranga tsy fahombiazan'ny ampahany na tanteraka rehefa nifindra avy tany Microsoft nankany Zentyal izy ireo. Ary ny fanaovana an'io fitsambikinana io dia tsy maintsy miomana tsara ianao ary manana fahalalana momba ny Free Software. Tena sarobidy amiko ny hevitry ny mpiara-miasa amiko sy namako dhunter izay nametraka fanehoan-kevitra feno fahasahiana momba an'i Zentyal tao amin'ilay lahatsoratra BIND sy Active Directory® - SME Networks, izay azonao vakiana.
Nanoratra lahatsoratra maromaro momba ny Kitapo serivisy ClearOS 5.2 1, vahaolana tena tsara izay nandrombaka loka tamin'ny fotoanany ho an'ny Best Free Software, izay narahiko mandra-pamakiako ilay lahatsoratra ClearOS 6.3 dia Andriamanitra, Mampiasà 5.x foana. Politika mampalahelo ClearCenter, orinasa kely natokana hanao ClearOS - ary koa programa hafa- hanakatona ireo kinova roa ireo Community ny vokatr'izy ireo. Na izany aza, tsy nitsahatra nijery ClearOS aho mandra-pahatongan'ny kinova 7.2. Raha ny marina dia namokatra ClearOS 5.2 nandritra ny 4 taona mahery aho, niaraka tamin'ny mpanjifa Windows isan-karazany sy solosaina maherin'ny 60.
Ho an'ny orinasa tsy miankina, ny tombony farany dia tombony. Lojika! Marina? Ny zava-mitranga dia tsy takatr'izy ireo amin'ny ankapobeny ny haben'ny fanapaha-kevitra mifototra amin'nytoy ny ao amin'io fenitra tokana io. Raha mikasa ny hijinja ianao, mamafy. Jereo ny Red Hat ho ohatra iray amin'ny zavatra tokony hatao.Raha ny tokony ho izy, ny ClearOS dia mifototra amin'ny rafitra fiasa CentOS / Red Hat
, saingy miharihary fa tsy tamin'ny ohatry ny Orinasa Red Hat toa izany. Nandeha izy ary nividy azy i Red Hat indray andro raha liana amin'ny fahalianany ny hifampiraharaha amin'i Microsoft, fanontaniana iray toa tsy -mba fotoana fohy- noho ny fahalianany miavaka amin'ny Server 389 Directory izay azo ampifanarahana amin'ny Microsoft Active Directory an'ny fomba roa.
Angamba hatreto aho dia nanonona telo - amin'ireo programa efatra izay sahiko lazaina fa ireo no ampiasaina indrindra amin'ny serivisy momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana amin'ny tambajotra SME maro:
Microsoft Directory Directory
ClearOS - PDC mifototra amin'ny Samba
Zentyal - Directory mivantana miorina amin'ny Samba
Ary raha mijery akaiky isika, ny REHETRA dia mifantoka amin'ny Microsoft Networks! Ny fenitry ny mitana ny toeran'ny -izay tsy midika hoe izy no tsara indrindra amin'ny fahamendrehany - ny Microsoft Network. Na tiantsika na tsia, na manohitra azy isika na tsia, dia zava-misy izay tsy azontsika atao sy tsy tokony hodian-tsy hita.
Ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana sy ny fanompoana ny SME Networks dia tsy afaka tsy miraharaha an'io zava-misy io.
Heveriko fa amin'izao fotoana izao ny Gigantic Lack of Privacy izay ianjadian'ny rafitra fiasan'i Microsoft dia tsiambaratelo na amin'iza na amin'iza, azo hamarinina mora foana amin'ny famakiana ireo fangatahana DNS nataon'ny rafitr'izy ireo miasa -azavaina tamin'ireo lahatsoratra teo aloha momba ny lohahevitra DNS sy DHCP- rehefa manangana izahay voaisy ny fangatahana.
Toa ny ankamaroan'ny mpampiasa farany izay mampiasa ny rafitra fikirakirana Microsoft dia mbola tsy nahita ny sarimihetsika Amerikanina «Fepetra sy fepetra mety hihatra -2013"; "Snowden -2016»Avy amin'ny talen'ny tsara Oliver Stone; sns, ary koa ny famakiana lahatsoratra be dia be momba ny lohahevitra navoaka tamin'ny Internet.
Ry malala sy malala, bilaogy natokana ho an'ny Free Software ity. Tsy misy zavatra hafa. Ary raha tsy manana fahatsiarovana tena ratsy izy ireo dia ho tadidiny rehefa niantso an'i Stallman a Microsoft fa ... Saingy, izao Microsoft Tia Linux. 😉 Namoaka aza izy a kinova an'ny Server Server SQL anao izay azo apetraka amin'ny Red Hat. Ohatra iray fotsiny amin'ny fanodikodinam-bola mety hitranga izay orinasa lehibe matanjaka afaka manery antsika hifototra amin'ny tombotsoany ara-toekarena. Androany halako ianao ary tiako ianao rahampitso. Miankina amin'ny fahazoana vola daholo izany.
Na dia mety tsy mino an'io aza ny maro, ny làlana mankamin'ny fotodrafitrasa momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana dia mandeha amin'ny toerana rehetra sy ny crannies teo aloha, ary heveriko fa mahasalama ny manetsiketsika ny taolam-paty izay tapa-kevitra ny hiaraka amiko amin'ity traikefa nahafinaritra ity. Raha te hahalala ohatra velona amin'ny fanenomana ny Microsoft Corporation mahery ianao dia araho ny tranokala Tena Linux Lahatsoratra nataon'i Eduardo Molina, FSFE: "Ny teny farany dia mbola tsy voalaza tao Munich", sy ireo asa soratra teo aloha rehetra mifandraika amin'ilay lohahevitra, navoaka tao amin'ity bilaogy ity izay manana kalitao tena tsara.
Araka ny nolazainy Morpheus a Neo amin'ny sarimihetsika tsy azo ihodivirana «Matrix': Sokafy ny sainao!.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Avy amin'ny Linux » [Hevitra] Serivisy momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana - SME Networks
Lahatsoratra mazava, manan-danja ary mahasarika. Misaotra anao indray tamin'ny fotoana sy ny ezaka natokana ho anay.
Mahaliana ihany koa ny lahatsoratra satria mamaritra ny zavatra niainany tamin'ny fomba fomba nitondran'ny sysadmins ny fitantanana tambajotra.
Tena sarobidy tokoa ny fahalalana ny hevitra tsy manambola velively izay voalaza momba ny fampiharana ny Zentyal amin'ny maha PDC + AD.
Mamaly an'i Iwo
Salama IWO! Azoko mazava fa ny hevitra nambara dia momba ny kinova Zentyal Community, tsy mandoa izany izy, satria ny farany tsy hitako. 😉 Fantatro amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminao fa mieritreritra ny fifindra-monina amin'ny Free Software ianao. Manoro anao aho ary miandrasa kely hahafahantsika miditra amin'ny fomba fampiharana ny Active Directory - Domain Controler "AD-DC Samba 4.51".